Yepamusoro Yakaverengerwa Dhonza Pasi Kicheni Faucets Brushed Nickel
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Pasi Makapu Makapu / WOWOW Wepamusoro Rated Dhonza Pasi Kompombi Mabheti Akakweshwa Nickel
WOWOW Pamusoro Rakagadziriswa Pasi Kicheni Faucets Yakapeputswa Nickel
Iyi dhizaini yekicheni kiyi ine hunhu hunotevera:
Bata nyore nematombo ekicheni, matatu marudzi emvura, shandura pakati pekuputika nyore nyore, wedzera pombi yemvura, uye nzvimbo yekuchenesa haina kugumira.
10-nhanho electroplating, yakasimba uye ngura-chiratidzo, yakakwirira-yemhando ceramic valve musimboti, ndiyo kiyi yemvura inodonhedza faucet. Kutanga zvinyoro-nyoro, geza maoko uye miriwo musina kupaza
2310101 mirairo yekuisa
WOWOW kicheni kicheni inodhira kunze 2310101 ine zvakawanda zvakakura zvichienzaniswa nevamwe vatengesi: fekitiri yemukicheni ine yepamusoro mhando zvinhu: yakapukutwa inodziya (bronze chrome), kukwenya-kurwisa, kupusa kushamba; Chinhu cheiyo nheyo: yakakwirira-yekuchenesa ndarira uye yakakwira mhando yendarira nati, ine simba, inotungamira-isina-simba, yekuora-inodzivirira.
Prima dhizaini & chengetedza mvura: hombe kumanikidza kicheni singi faucet inowedzera kicheni kumira-kusunda bhatani, inogona kudzivirira mvura mune chero yakapihwa nguva. (Yakagadzirwa nepamusoro-soro zvinhu uye Nyanzvi tech, usanetseke nezvekudonha)
Mubatsiri mukuru wekicheni: kicheni single-lever sink mixer uchishandisa dhonzaini-inobudira kunze: 1.5m kuputika-chiratidzo hose inopa 85cm yekugezera nzvimbo; Swiveling faucet: 360 °, yakakwana kune maviri maviri kunyura, nyore kuchinja kubva pane imwe kunyura mune inotevera; unogona kufadza kona imwe neimwe mukicheni! Iko kusanganisa kwakakodzera neakaomesesa ceramic seals / disks inoshivirira kukakavara kwakanyanya kuburikidza nekushisa kupisa.
Mixer Tap Bhegi Kicheni, inodziya uye inotonhora Mvura: Injiniya ceramic katuriji, inopa inononoka uye chaiyo kudzora kwekutenderera uye tembiricha yemvura. ; Inobvisika Foamer, yakapusa kuchenesa kana kutsiva. Iyo yekusanganisa faucet inogamuchirwa kune yakanyanya kumanikidza masisitimu / Haifanane yakaderera kumanikidza nzira.
Kurumidza-kubaya chimiro: Nepfungwa inokurumidza kuisa, yakagadzirirwa kunyanya kune yakatemwa nzvimbo uye novices, nyore; kumisikidzwa kukwira uye hakuchadi iyo wrench. Makore mashanu chigadzirwa garandi.
SKU: 2310101 Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Pasi Makapu Makapu Tags: Bronze Nickel, Mumwe Hole, mwaya
Brushed Nickel 101
Stainless Simbi / Brass / Zinc chiwanikwa
Imwe-Hosi kana Tatu-Hosi
1.8 Maroni Paminiti
Pakati, Kuruboshwe, Kurudyi
5-gore ine chikamu chechirango
WOWOW Kicheni Sink Musanganiswa Bhatisisa Bvisa Spray Bru ...
WOWOW Flat Kicheni Faucet Yakasarudzika nickel
WOWOW Mafuta Rubhabhu Bronze Pot Filler Wall Wall